Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်)
Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Celestoderm® (betamethasone valerate) ကို အရေပြား ယားယံခြင်း နှင့် နှင်းခူ၊ Psoriasis (ကိုယ်ခံအားစနစ်မူမမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြားရောဂါ) အရေပြားဓါတ်မတည့်သောကြောင့် ရောင်ရမ်းခြင်း ၊ အဆီကြိတ်များထွင်ခြင်း တို့ကို ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။ ထိုဆေးသည် အရေပြားနီရဲမှု၊ ရောင်ရမ်း မှုများကို လျော့နည်းစေသည်။
Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ခရင်မ် သို့မဟုတ် အဆီ
ခရင်မ် သို့မဟုတ် အဆီ ကို ရောဂါဖြစ်သော နေရာကို ပါးပါးလိမ်းပါ။ တနေ့တကြိမ် မနက်တိုင်း သို့မဟုတ် မနက်နှင့် ည နှစ်ဘကိမ် လိမ်းနိုင်ပါသည်။ အနာကောင်းသွားလျှင် ဆေးရပ်နိုင်ပါသည်. ဆေးကို သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ၄ ပတ်ထက်ပိုမလိမ်းသင့်ပါ။
ဆေးရည်ကို ရောဂါဖြစ်သောနေရာတွင် အစက်ချပြီး အသားထဲစိမ့်ဝင်သည်အထိ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ တနေ့လျှင် ၁ ကြိမ် မှ ၂ ကြိမ် အထိလိမ်းနိုင်ပါသည်။
ဆေးလိမ်းပြီး လျှင် လက်ဆေးပါ။ လက်တွင်လိမ်းရပါက ဆေးရန်မလိုပါ။
ဆေးရည်ကို မလိမ်းမှီတွင် သေချာစွာလှုပ်ပါ။
ဆေးလိမ်းထားသောနေရာကိုဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲ ထူသော၊ လေပေါက်မရှိသော အဝတ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်း မပြုရ။
Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Celestoderm® (betamethasone valerate) ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Celestoderm® (betamethasone valerate) ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Celestoderm® (betamethasone valerate) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Celestoderm® (betamethasone valerate) ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Celestoderm® (betamethasone valerate) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Celestoderm® (betamethasone valerate) ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ဗိုင်းရပ်ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ရေယုန်၊ ရေကျောက် ဖြစ်ခြင်း
Corticosteroid နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အရေပြား တွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးဝင်ခြင်း နှင့် မှိုရောဂါများဖြစ်ခြင်း
ထိုဆေးကို မျက်စိ ၊ ပါးစပ်၊ စအိုနှင့် လိင်အင်္ဂါတဝိုက်တွင် မလိမ်းပါနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိကိုမသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။
Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါ ဆိုးကျိုးများခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်း ပြသရမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးလိမ်းထားသော အရေပြားနေရာတွင် ယားယံခြင်း၊ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ခြင်း
ရေကြည်ဖုများဖြစ်ခြင်း၊ အသားလောင်ခြင်း၊ အဖတ်များကွာကျခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်း
ပါးစပ်နားတဝိုက်တွင် နီရဲခြင်း နှင့် အဖတ်များကွာကျခြင်း
အရေပြားပါးပြီး သွေးခြေဥခြင်း (အထူးသဖြင့် အရေပြားခေါက်သော နေရာများ၊ လက်ချောင်းများကြားတွင်)
အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ဆေးကူသမှုခံယူရန် သီးသန့်မလိုအပ်ဘဲ အချိန်တန်လျှင် ပျောက်ကင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန် က အဆိုပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်ရန်၊ လျှော့ချရန် ဆေးများ ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့သော်
အောက်ပါတို့ အဆက်မပြတ်ဖြစ်လာပြီး သင့်ကို ဆိုးကျိုးများပေးလာပါကဆရာဝန်အားမေးမြန်း တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
အရေပြားလောင်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ ထုံပြီး မသိတော့ခြင်း၊ အပ်နှင့် ထိုးသလို စူးခြင်း သို့မဟုတ် ထုံကျင်သော ခံစားမှုမျိုးရခြင်း
ဆံပင်ပေါက်သော နေရာများတွင် ပူလောင်ခြင်း၊ ယားခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ဆံပင်အမြစ်နားတွင် ပြည်များဖြစ်ခြင်း
နဖူး၊ နောက်ကျော၊ လက်မောင်းနှင့် ခြေထောက်များပေါ်တွင် ဆံပင်များထူလာခြင်း
နဂို အသားရောင်ထက် ဖျော့သွားခြင်း
ဆေးလိမ်းထားသော နေရာတွင် အသားရောင်ဖျော့သွာခြင်း
လက်မောင်း၊ ခြေထောက် ၊ ကိုယ်နှင့် ပေါင်ခြံများတွင် ခရမ်းရောင်အရစ်များ ပေါ်လာခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Celestoderm® (betamethasone valerate) ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးများသည် Celestodrem နှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများဖြစ်ပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Celestoderm® (betamethasone valerate) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Celestoderm® (betamethasone valerate) ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ }
အောက်ပါ ကျန်းမာရေးပြသနာများရှိပါက ဆရာဝန်အားအသိပေးပါ။
Cushing ရောဂါစု Adrenal (ဂလင်းမူမမှန်ခြင်း)
ဆေးလိမ်းလိုက်သော နေရာတဝိုက်တွင် ပိုးဝင်ခြင်း၊ အနာဖြစ်ခြင်း၊ ပြဲခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ခရင်မ် သို့မဟုတ် အဆီကို ရောဂါဖြစ်သော နေရာကို ပါးပါးလိမ်းပါ။ တနေ့တကြိမ် မနက်တိုင်း သို့မဟုတ် မနက်နှင့် ည နှစ်ဘကိမ် လိမ်းနိုင်ပါသည်။ အနာကောင်းသွားလျှင် ဆေးရပ်နိုင်ပါသည်. ဆေးကို သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ၄ ပတ်ထက်ပိုမလိမ်းသင့်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သင့်ကလေးငယ်အတွက် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ)
Celestoderm V ( စလီဆတိုဒမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Celestoderm® (betamethasone valerate) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Celestoderm® V/2ခရင်မ် ဝ.၀၅ %
Celestoderm® Vခရင်မ် ဝ.၁%
Celestoderm® Vအဆီ ဝ.၁%
Celestoderm® V/2အဆီ ဝ.၀၅%
Celestoderm® (betamethasone valerate) က လိမ်း ဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံး လိမ်း ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ် လိမ်း ရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုး လိမ်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Celestoderm®.http://chealth.canoe.com/Drug/GetDrug/Celestoderm. Accessed November 24, 2016